Unokufumana njani imali yokuhamba? - 1aviagem.com
Unokufumana njani imali yokuhamba?
Isithuba esingaphambili: Sithini malunga neMalaysia?
Isikhundla esilandelayo: Ngaba ivakala njani ukuba ungundilili? (Viyethnam)
Ithunyelwe 8 Oktobha 2018 yi Rômulo Lucena
Ewe, le mxholo ngokwenene yavela emva kwengxoxo phakathi koogxa malunga ne-Mega-Sena, i-lotus nezinye i-lotto. Umbuzo wukuthi: Unokwenza ntoni ukuba ufumene i-1 yezigidi? Kwaye phakathi kwendibano ndagqiba ukubona into endiyenzayo okanye engokwemvelo ayikho kubantu abaninzi. Bacebisa ukuba ndiyithathe eli thumela kuba mhlawumbi luza kunceda abaninzi abantu bahamba ngakumbi kwaye bangcono. Yiza ngoko.
Impendulo ecacileyo kakhulu endiyinike yona xa ndenza i-million reais net net tax:
"O kuqala into endiyayenzayo kukuba kukhangele ukuba kukho isigidimi esiya kubakho! 1.000.000,00 😜🤑 ".
Kwaye ngelixa abaninzi bathetha ngokuthenga imoto enamandla ngakumbi, indlu, izindlu ezimbini, enye yokuqashisa kunye nomnye ukuhlala, ndathi: Ndiza kutyalomla yonke into kuqala kwaye ndiza kuhamba ndodwa ngeniso.
Ngoko abantu baqhubeka bekhangele kum nje ngokuba ndiyilungu le-ET, kodwa anithengi nto? Oko kwandikhokela kule nkcazelo elandelayo.
1- Faka isicelo sakho semali.
Ndathi ewe, ndiza kuthengela ithikithi lomoya, ukuhlala, ihotele. Abafana, ndiza kusebenzisa inzuzo ukuze sikwazi ukuhamba.
Kodwa ukuba uhlale unemali engenayo ukuze usebenzise okokuqala imali, kungenjalo kuya kuphazamiseka okanye kukuphela, njengoko sisebenzisa okanye ukunyuka kwamaxabiso.
Ngoko ndenza inkcazelo ngokukhawuleza. Ukuba usebenzisa isicelo sesigidi seerandi kwizinto ezifumana ubuncinane i-0,5% ngenyanga, uzakufumana i-5.000,00 ngenyanga. Nenyanga. Le nto isele iyingcezu enhle yemali.
Ndathi kuye: "O, kodwa kuphela ngamawaka angama-5 awukwazi ukuhamba eYurophu! Ngakumbi wena othanda ukuhamba phesheya. "Ndaphendula kuye: ewe unako, okusikhokelela kwisiqalo sesibini:
2- Funda indlela yokugcina imali.
Ngoku, ukuba unayo i-5.000,00 ngeenyanga kwaye uhambo olubiza i-10.000,00 ngokupheleleyo. (lo ngumzekelo nje). Kulula ukuyixazulula, ugcine nje ngenyanga ngenyanga ye-5 enyangeni ezayo uza kuba ne-$ 10.000,00. Ugcina namhlanje ukusebenzisa imso. Oko kusikhokelela kwisinye sesithathu.
3- Funda indlela yokuqhawula uhambo ngaphandle kokudibanisa ikhadi.
Kwaye ndilapha "fundisa" indlela onokuyenza ngayo ikhefu uze uhlawule! Ndiza kucacisa.
Iphakheji lohambo ndiya kubhekisela kulo, kuya kuba ukwahlula iindleko zohambo ukuya kumaqela eendleko. Amava andibonisa ukuba iindidi eziphambili zi:
Ukufuduka (i-airfare, ibhasi, isitimela, okanye iinqwelo zokuhamba, iinqwelo-moya, isithuthuthu).
Indawo yokuhlala (iihotele, ihostele, indawo oza kuhlala kuzo).
Ukutya kunye nohambo. Ndazibandakanya kubo bobabini ngenxa yokuba ukutya rhoqo ngaphakathi kwirebe.
Ukwahlula iindidi zeendleko onokuzihlawula umboniso ngamnye, zibuze malunga nesaphulelo, kunye neeflethi ngaphandle kweendleko zokuhamba ngaphandle kokusebenzisa isitifiketi sekhadi lesikweletu.
Ngoko ngenyanga yokuqala uthenge ukuthutha, ngenyanga yesibini ubhala ukuhlala, okwesithathu uqesha iihotele, kuloo mihla, okanye ugcine imali yezohambo.
Ngokuqinisekileyo ezi ndleko azihlanganisi lonke uluhlu, ziphela kuphela eziphindaphindiweyo phantse zonke iindwendwe. Injongo kukubonisa ukuba usenokubashiya uhlawule kwaye ke uhambo ngaphandle kokuhlawula yonke into ngexesha. Esi sihloko sithandwa ngakumbi kwi-dollar ephezulu. Kuba ukuba uhlawula ngaphambi kokunyuka kwedoli, thabatha izinga lokutshintshiselana.
KwiPOST elandelayo ndibeka iingcebiso zemali kulolu hambo. Ukuba uthathe ukuchitha ixesha, ukubonelela ngezinye izinto ezingalindelekanga.
Kodwa ekubeni ndicinga ukuba wena, onjengaye, andinayo iidola ezigidi zezimali ukuze utyalomle kwaye uthabathe i-5.000,00 utywala ngenyanga, isiphakamiso sifanele sisebenzise inani elilinganayo.
Ngokomzekelo, ndingayigcina i-500,00 ngenyanga? Ngoko ndiza kusindisa unyaka, ndivumele ukuba kusetyenziswe uhlobo oluthile lotyalo-mali oluya kuninika imimiselo yokuyithatha xa ndiyidingayo. Umzekelo, ii-CDB, kunye nokuthengwa kwansuku zonke, uNondyebo ngqo kunye nokugcinwa. kwiinyanga ze-12, uya kuba ne-$ 6.000,00 ukuyisebenzisa kwaye ungenza isicwangciso esichazwe ngasentla. Ukufumana imali encinci yemali engenayo. 😄.
Ngoko ukusuka kwi-500,00 kwi-500,00 sinokuhamba.
Khumbula, ukuba awukwazi ukufumana uhambo lwe-$ 10.000,00 uze wenze uhambo olulingana nebhajethi yakho. Kungcono ukuya kwindawo oya kuyo apho uphumla kwaye unqwenela ukudlula kwamanani kumazwe angaphandle ngaphandle kwimo, ukusuka "ndaya kwelinye izwe." Okanye, gcina i-500,00 nyangazonke malunga neminyaka emibini ukuba uya khona. Uyabona ngexesha elizayo. (I.
Ukuba uthanda ukucwangcisa kwethu ukuhamba kweemali, masivuyiswe phantsi apho. Gqabaza, xhasa le bhulogi.
Cofa kwimephu engezantsi ukuze ufunde kabanzi malunga namazwe.
Njani 1.000.000 zichazwe blog khadi IComidas iingcebiso zokuhamba Dinheiro kwamanye amazwe zemali UkuHamba mega sena fakela ithikithi lomoya iindwendwe cwangciso lomkhumbi esinye sezigidi uhambo